Atileetota Itoophiyaa Kalee Maratoonii HustenTeksas,Amerikaatti Dorgoman Moohan Haga Guddaan Haajii Adilootti Leenjise
Amajjii 21, 2014
WASHINGTON,DC — Maratoonii Husten Tekasas Amerikaatti maqaa Chevron marathon jedhaniin moggaasan ta atileetotii Itoophiyaa moohan tun ta baranaa waliin 42essoo.
Yoo kalee Ammajii 19,jalqaban nama kuma hedduutti dorgommii karaatti baafate.Haga guddaan atileetota Itoophiyaa leenjisaa Hajjii Adilo leenjsieetti moohate.
Hajii Adiloo,leenjsiaa Toleeraa Dinqaa fi leensjistootii Itoophiyaa hedduun akkanuma atileetota Itoophiyaa leenjsiaa addunyaa irratti moohachiisuun beekaman.
Maratoonii km 42 ta dhiiraa keessaa tokkeesoson Bazuu Warquuti 2:7:32 fixate tokkeessoo, Geetachoo Garbaati 2:07:54 fixee lammeessoo, atileetiin Meksikoo Jose Antonio Uribeti ammoo saatii 2:07:54 fixee sadeessoo bahe.
Maratoonii dubraa ammooAbbebechi Beqqelee tokkeessoo,Meskerem Aseffaa lammeessoo,Galatee Burqaa sadeessoo,Biruktayit Dagafaa abreessoo fi Makiddaa Haajii shaneessoo taate.
Gama kaaniin ammoo dorgommii Guutuu Oromiyaa Naqamtee dorgomaa bahan haga guddaan kilabii Adaamaatti moohe.
Dorgommii NFL,National Foota Ball League,dorgommii gareeleen Amerikaa 32 AFC fi NFC jedhanii fulaa lamatti bahani taphatan.Haga ganna tokko taphachaa bahan.AFC keessaa Denver, NFC keessaa ammoo Seattle waancaa walti hafa.
Dorgommii NFL,dorgommii kubbaa miilaa Amerikaa harkaa fi miilalleen walqixxee taphtaniitii baranaa killbii Seattle Seahawks fi ta Denver Broncosti waancaa,Superbowl jedhanii walti hafee,gurrandhalaa 2,bara 2014tti waancaa taphata.
Winter Olympic, Olompikii Russiaa ji’a dhufu keessaa magaalaa Sochitti jalqaban biyya 88 fi atileetooti 2,500 walti dhufee dorgomaa, Itoophiyaan barana kana nama isii fulaa bu’ee dorgomuuf hin arganne.
Dorgommii EPL,English Premiere League keessaa ammoo tapha kaleetti,Ammajii 19, Tottenham Swansea 3-1,Chelsea Man United 3-1 moote.Ta La Liga eegii jalqabanii turban 20essoo kalee qofa goolii 10tti gale.
Ta Seriea A, Xaliyaanaallee eegii jalqabnaii torbana 20esso keessa jiranii ta Juventus Roma 4-3 moote waliin goolii 20tti gale.
Liigii 1, ta Farsnasaayiiti eegi jalqabani akkanuma torbaan 20 jala jirani kilabii Parsi St.Geraminitti dura jiraa,As Monaakootti itti aanaa,sadeessoon ammoo Lille.